Sidee Baan dejinta File An MOV (Quicktime) si Adobe jilitaankii
Ku guuldareystay inuu Radidiyaha aad video files xitaa marka MOV (QuickTime) file waxaa uploaded in Adobe jilitaankii? Miyaad keentay in fariin qalad ah oo ku saabsan screen leh in files video waa aqlka markii aad isku dayday in ay u guuraan, soo dejinta ama faylka MOV (QuickTime) wareejiyo Adobe jilitaankii? Haddii aad u isticmaaleysaa hadda version weyn ee (version tusaale ahaan ka hor Adobe CS5) ee Adobe, laga yaabee casriyayn ah version Adobe uu ka caawin karo. Xayiran Weli la isku day lagu guuleysan? Waxaa laga yaabaa in ay jiraan qaar ka mid ah codec loo baahan yahay ka maqan yahay ama ay tahay qaab la file video leheyn. Oo maxaad wax u siin waxa kale oo ay isku dayaan la Wondershare Video Converter Ultimate ?
Haddii aad qabto hubi-ka baxo ama u akhriyi articles kale ee la xiriira, forums ama la is weydiiyo su'aalo 'goobta; waxaad laga yaabaa in la soo gunaanaday isla inaan. Jawaabta ama xal waa in loogu badalo aad QuickTime MOV video files leh codec habboon ka hor inta la ciyaaro Adobe jilitaankii. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa in loogu badalo faylasha QuickTime MOV wixii kale Converter video in aad laga yaabo in ay hore u rakiban iyo u aragto haddii ay dajiyaan yaabaa file MOV in Adobe jilitaankii.
Software Qaar ka mid ah soo wareejinta qaban karaa oo waa in aad si aad u daawato kuwa files MOV on Adobe jilitaankii karo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kiisas ku dheehan ka dib markii ay soo degida faylasha MOV, waxaa laga yaabaa inaad aragto arrimaha la loo maqli karo video ah. Taasi waxay sidoo kale sababta waxaan hadda aad ku talineyso in Wondershare Video Converter Ultimate ah, kaliya haddii ay dhacdo Yuru waa ay idiin. Haddii aadan u baahnayn in aad xaalkaa videos, markaa waxaa jira ficil laba talaabo ku lug.
1. Jiid-iyo-hoos u dhac faylasha aad MOV (QuickTime) i
Sida kale oo kasta oo kale video Converter, waxaad si fudud u jiidi-n-dhibic kartaa video files. Kala duwan yihiin marka la eego baaxadda weyn ee qaabab file wax soo saarka oo ay taageerayaan. Kale oo ka taageeraya files MOV diinta si aad u ciyaari karto ama la daawato Adobe jilitaankii, waxa kale oo aad u bedeli karaan faylasha MOV aad u la wadaago ama geliyaan gal YouTube iyo xitaa Facebook.
2. Beddelaan faylasha aad MOV (QuickTime) si Adobe jilitaankii
Riix-on menu hoos-hoos hoygaaga ku Qaabka Output dooro nooca qaab file in aad u baahan tahay si aad u dajiyaan karaa, ciyaaro iyo la daawato Adobe jilitaankii. Ka dib markii in, ka badalo button yahay oo dhan aad u baahan tahay. Marka la dhammeeyayna, aad riix kartaa fariin pop-up lagu soo celinayo badaley faylasha video.
Kale badan iyagoo si loogu badalo file MOV si aad u Adobe jilitaankii awood, waxa kale oo aad dooran kartaa in aad xaalkaa video files ka hor inta aadan bilaabin hawlaha qaab beddelidda. Waxaan ka mid ahaa xiriirka sida halka aad ka heli karto Hanuuniyaa dheeraad ah si sixiddiisa HALKAN . Waxaad tegi kartaa iyaga dhex kartaa xawaaraha aad rabtid.
Waxa intaa dheer in hawlaha tafatir ah, waxaad isku dayi kartaa sidoo kale aqoonta DVD helidda, maxaa yeelay, gaar ahaan ka duwan video Converter Tani waxay sidoo kale kuu ogolaanaya in aad nuqul oo gubi DVD ee laguugu sahlo. Si aad u ogaatid qaababka kale in tani ay Converter kale video leeyahay in ay bixiyaan, hadda download it! Waxaad dhab ahaan doonaa ceeboobi maayo.
> Resource > Video > Sidee Baan dejinta File MOV An (Quicktime) si Adobe jilitaankii?